होमपेज / कला / नेपाली फिल्म / रेजिनालाई कारबाही गर्न निवेदन दर्ता
रेजिनालाई कारबाही गर्न निवेदन दर्ता	28 Jun 2013 | 10:11am शुक्रबार १४ असार, २०७०
काठमाडौं, असार १३ (नागरिक)– केही महिनाअघि पार्टनरका रूपमा मिलिजुली हिँड्ने कविता श्रेष्ठ र रेजिना उप्रेतीबीच फाटो आएको छ। दुवैले मिलेर बनाएको फिल्म 'वरदान' घाटामा गएपछि यस्ता अवस्था आइपुगेको हो। घाटाको हिस्सेदार बन्न अस्वीकार गरेको भन्दै कविताले रेजिनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी छन्। कविताले ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रेजिनालाई कारवाही गरी पाउँ भनी निवेदन दर्ता गरेको जनाएकी छिन्। उता जावलाखेल प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता रामदत्त जोशीले भने लेनदेनको मुद्दा प्रहरीले नहेर्ने भन्दै उजुरी दर्ता नगरेको जनाएका छन्। निर्मात्री कविता भने रेजिना विदेश जाने ताकमा रहेकीले उनलाई रोकीमाग्न गृह मन्त्रालयलाई समेत आइतबार पत्राचार गर्ने योजनामा छिन्।
कविताले यसअघि चलचित्र निर्माता संघमा पनि मुद्दा हालेकी थिइन्। निर्माता संघको पहलमा दुई पक्ष बीच वार्ता भए पनि रकममा कुरा नमिलेकाले कविता प्रहरीकहाँ पुगेकी हुन्। 'मैले हालका लागि १० लाख रुपैयाँ मात्र दिए पनि हुन्छ भनेकी थिएँ, रेजिनाले त्यति पनि तिर्न चाहिनन्। बाध्य भएर कानुनको सहारा लिएकी हुँ,' कविताले भनिन्। रेजिना भने ३०–४० वटा हलमा फिल्म रिलिज हुन बाँकी रहेकोले बेलै नभई हिसाबकिताब गर्नु मुर्खता रहेको बताउँछिन्। 'अझै पनि ४० भन्दा बढी हलमा फिल्म चलेको छैन। भिसिडी–डिभिडी पनि बिक्री भइसकेको छैन। मैले कसरी तत्काल पैसा बुझाउने?' फिल्मकी हिरोइन समेत रहेकी रेजिनाले प्रश्न गरिन्। आफ्नो पारिश्रमिक, निर्देशक र कलाकारलाई दिएको पारिश्रमिकबाहेक आफूले फिल्ममा ५ लाख रुपैयाँ हालेको रेजिनाको हिसाब छ। कविताका अनुसार प्रहरीले रेजिनालाई सोधपुछका लागि आइतबार बोलाउने जानकारी दिएको छ। « 'सिलु'को २५ औं वर्ष मनाउँदै
फिल्मको बाढीले कतिलाई डुबाउँला? »